Debzọ Brexit bụzịrịrị atụmatụ echeburu: Martin Vrijland
isi mmalite: thesun.co.uk
Ihe ojoo Brexit aburula uzo atumatu. Ndị na-eso saịtị a kemgbe oge ụfọdụ gụrụ ya ọtụtụ ugboro, mana ka anyị chịkọtaghachi ya. Ọ bụrụ n’ịhụ na onye ndọrọndọrọ ọchịchị ọ bụla bụ naanị onye na - eme ihe na - eme ihe dị mkpa gbasara ijikọ ụwa ọnụ ma na - arụ ọrụ na nzuzo maka njikwa ụwa, mgbe ahụ ị ga - ahụ na debxit debacle na - ejekwa ozi maka njikọ ụwa. I nwere ike ịsị:Ee, mana Brexit bụ mgbochi EU ma yabụ na-emegidekwu ikike ọchịchị". Nke ahụ bụ echiche nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mgbasa ozi kpaliri. Ebumnuche Brexit bụ mgbe ọ ga-akwụsị na ọdịda.
Ọ bụ naanị ime ihe na obere ụlọ nke Britain, site na Theresa May na Jeremy Corbyn na esemokwu niile gbasara ezigbo azụmahịa ma ọ bụ nke ọjọọ kwesịrị inye echiche na anyị na-emeso usoro ezigbo ọchịchị. Theresa May enweghị ike inweta nkwado maka nkwekọrịta ahụ ma mezie ụzọ maka Hardliner Boris Johnson na ihe ọhụrụ kachasị na-adọrọ mmasị, onye Johnson na-anwa ịmanye nkwekọrịta Brexit na ndị omebe iwu Britain na-anwa ịgbagha nke a ọzọ. (lee nsonaazụ ngagharị na Houselọ Britain nke Commons ụnyaahụ). Don't chere na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ? You na-agba ama banyere omume nke ndị na - eme ihe nkiri; akpọkwara ‘ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị’.
M na-akpọ ya mgbe niile: Brexit ga-egosi Europe dum na mgbe ịchọrọ ịpụ na EU, ị ga-ahụ ya na akpa gị. Na mbu, agbanyeghi nke oma, emere ihe iji dozie onodu ojoo nke EU. N’ezie, anyị na-ahụ n’ụwa niile na ejiri otu nlezianya kee otu na otu ụdị: akara ‘aka nri’. Nke ahụ malitere site na Nigel Farage na ndị otu ya na EU, bụ ndị kwupụtara n'ihu ọha ma kwusie mmụọ ọjọọ nchịkwa na-enweghị atụ. Na US ọ bụ Donald Trump na-anọchite anya ika ahụ n'aka nri yana na Brazil ọ bụ Jair Bolsonaro. Na mba EU ndị ọzọ anyị hụrụ aha dịka Marine Le Pen, Thierry Baudet ma ị nwere ike mezue ndepụta ahụ. Udiri ‘aka nri’ a na-agbaso echiche ụfọdụ nwere njiri mara ya. Ọtụtụ mgbe oge ha ji eme ihe ịhụ mba n'anya, ha na-akatọ ihe ndị mere n'oge gara aga (nke a nwere ike ịkatọ dị ka "echiche ọgbaghara") ma na-agba mbọ maka nchebe siri ike nke akụ na ụba ha. Site na nke a ị ga - amata na anyị na - ejikwa pawns nke otu ike ngọngọ, n'agbanyeghị na ị nwere ike ịda ụda na-emegide ihe. M ga-akọwa.
Ihe kpatara ejiri wulite aha a '' kwesiri 'nke oma bu nihi na ndi ochichi ndi mmadu na - achi ndi mmadu (ndi ihe a bu ndi mmadu n’onye ndoro ndoro ochichi ime ka ikwenye na ochichi onye kwuo uche ya n’ezie) mara na enwere nnukwu ihe omuma banyere ya. echiche n'etiti ndị mmadụ gburugburu ụwa, megide atụmatụ ụwa. Kedu ihe ị ga - eme karịa ka ịgbasawanye akara a na aka nri site na ọtụtụ mgbasa ozi na ime ka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-akwadokarị, wee mezie ha maka ndakpọ akụ na ụba; nnukwu ọgba aghara ọha na eze? Ọ bụrụ na i mee ka ọkara nke ndị ụwa nọrọ n'ụgbọ mmiri nke ọdụ aka nri wee wee hụ na enwere ike ijide ụgbọ elu ahụ maka ọgba aghara na ndakpọ, ị nwere ike ịkọwapụta ụgbọelu aka nri na ndị niile nọ n'ụgbọ mmiri dị ka ndị ikpe mara.
A na-arụ ọrụ bọmbụ ndị dị na ala nke ụgbọ mmiri ndị nwere ikike aka nri n'otu oge. Weebụsaịtị alt-market.com na-akọwa nke ọma etu ndị na-ahụ maka akụ na ụba ụwa siri mee atụmatụ maka ọdịda akụ na ụba US n'okpuru Trump. Anam ewere ọnọdụ ahụ anyị hụrụ ihe yiri nke ahụ na UK nke nwere akara n'aka nri. Ma ọ bụ enweghị nkwekọrịta Brexit ma ọ bụ yigharị Brexit site na agha ndọrọndọrọ ọchịchị ma ọ bụ ntuli aka ọhụụ nke a ga-enwe: ọ ga-akụzị akụ na ụba Britain ma dọrọ ndị Europe ọzọ.
Na na-achịkwa demolition site na ika dị n’aka nri ị nwetala nnukwu mmeri maka atụmatụ ijikọ ụwa ọnụ n’otu ọdịda dara. Ndị niile mmiri na-eri nke ụgbọ elu aka nri ga-abụ ndị ọzọ ga-agbakasị ahụ wee jiri ụda na ábụbà bulie ha elu. Emesia ndi echiche nzuzu a nwere ike ijighachi azu n’ime ugbo ugbo agha ha tụkwasịrị obi nke ga - aga n’ihu n’ihu ga n’ihu ijikọ ụwa na ọchịchị ike. Ndị na-atụgharị uche ga-asa ahụ n'okpuru akwa nrụgide. Otu ahụ dị oke egwu, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, chọrọ ka ọ dị iche na-emechi kpamkpam. Anyị nọ n'isi ụbọchị nke ebumnuche a na-eme atụmatụ na US na Europe (n'ihi usoro Brexit nke a ga-emerịrị iji mebie ya). Kechie eriri oche gị, Dorothy! (Gụọ ebe a nke a)
Mkagbu a na-achịkwa nke ika ‘rechts’, Trump, Brexit (na ihe ọ bụla metụtara ya) amalitela.
Tags: Boris Johnson, Brexit, ndibiat, debacle, agba, Jeremy Corbyn, Lowerlọ dị n'okpuru ala nke Britain, ọ dịghị ihe, nzuko omeiwu
Na iji mezue akuko a, a na-ejikọ otu aka nri ya na ndị niile na-agba egbe (gụnyere mgbukpọ agbụrụ na Serbia) nke anyị hụrụ na mgbasa ozi dị ka akụkọ adịgboroja (psyops) n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Site na nke ahụ, e gosipụtara ụdị 'right-nku' dị ka agba ojii. Wayzọ a I mere ka ha bụrụ ihe egwu na egwu.
Are bụ 100% ziri ezi!
Amaara m n’ezie na ọ bụ nnukwu chatọ. A na-egwuri egwu ụmụ nkịta a niile nke ha ga-arụzu ruo ọgwụgwụ, na ihe mgbu ... Ma enwere nnukwu ihe na-aga: Zio Nazi Cabal na-anwụ mgbe ọ nwụrụ, ihe na-abịa abịa ka na-eche!
ruo na njedebe
Nkọghachi sharp ọzọ, daalụ.
Nwere ike ịbụ isiokwu dị mma maka ngalaba nke Society: -) - na sayensị sayensị na UVA.
Ọ bụrụ na ndị prọfesọ ka na-akpọsa ọchịchị onye kwuo uche ya, ka anyị mata
Boris Johnson sitere n'agbụrụ ndị ezinụlọ Turkish (Ottoman) nwere ike ịmalite ọgba aghara na Europe; ọgba aghara nke Alaeze Ottoman ga-enweta:
Site Wikipedia, akwụkwọ nkà ihe ọmụma n'efu
Si na mpịgharịa gaa na ọchụchọ
N’ebe a na-akpọ Ottoman Turkish, Ali Kemal bụ aha enyere, na enweghị aha ezinụlọ.
Onye Minista ime ime
Prime Minista Damat Ferid Pasha
Ọ bụ Mehmed Ali Bey buru ụzọ
Ọganiihu nke Hacı Adil Arda
Istanbul, Ottoman Alaeze Ukwu
Nwụrụ anwụ 6 November 1922 (agadi 54 - 55)
İzmit, Ottoman Alaeze Ukwu (Turkey ugbu a)
Nwunye (s) Winifred Brun
Umu 3, tinyere Zeki Kuneralp
Ndị ikwu Stanley Johnson (nwa nwa), Boris Johnson (nnukwu nwa)
Otu onye ọrụ gọọmentị (ndị ọrụ aka ọrụ), odeakụkọ, uri
Ali Kemal Bey (Ottoman Turkish: عَلِي كمال‌ بك; 1867 - 6 November 1922) bu onye Ottoman amuru Turkish  , onye edemede akwukwo, onye na ede uri  na onye ochichi nke ndi mbinye aka, ọnwa atọ Minista nke ime obodo na gọọmentị Damat Ferid Pasha, Grand Vizier nke Alaeze Ukwu Ottoman. Egburu ya n'oge agha nnwere onwe nke Turkey.
Kemal bụ nna Zeki Kuneralp, onye bụbu onye nnọchi anya gọọmentị Turkey na Switzerland, United Kingdom na Spain. Na mgbakwunye, ọ bụ nna nna nke nwa amaala Turkey Selim Kuneralp na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị Britain Stanley Johnson. Site na Stanley Johnson, Ali Kemal bụ nna nna nke Prime Minista Boris Johnson, yana Jo Johnson (MP maka Orpington), onye nta akụkọ Rachel Johnson, na onye ọchụnta ego Leo Johnson.
Nke a bụ ihe ọzọ na-egosi na nwa nwanyị a ga - anabataghị nne ochie Yahweh ga - anabatakwa sob nke ikpeazụ a! Know maara na anụ ogologo ọbịa na-akpọkwa chi na-akpọghachi ndị mbụ nọ n'onyinyo ya ...
N'aka ekpe ma ọ bụ aka nri dere, sị:
Ọ bụghị nke ahụ siri ike:
Israel uku uku ma uwa ndi ozo ?!
Alaeze Ottoman Ọhụrụ?!
Ọnwụ nke Europe. ?!
Ọdịda nke Zio Nazi USA
Agha wa nke Abụọ?!
Egwuregwu satanic jọgburu onwe ya ma ọ bụ ihe dị iche?
Ihe niile na-aga dịka atụmatụ…
“Eji m n'aka na euro ga-amanye anyị iwepụta usoro nke iwu amụma akụ na ụba ọhụụ. O nweghi ike itinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ugbu a. Mana ụbọchị ụfọdụ a ga-enwe ọgba aghara ma mepụta ngwa ọrụ ọhụrụ. "
" Ndi nzuzu dika gi?
Boris Johnson (nna nna Ottoman) nwere ike ibido ọgba aghara na Europe nke ga-ebuli Alaeze Ottoman? »
Nleta ha: 4.152.263